အမျိုးသားများ၏ ကျော်ကြားမှုနှင့် အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်မှ သူရဲကောင်း အမျိုးသမီး(၁၀)ဦး - ONE DAILY MEDIA
မိခင်များ၊ ဇနီးမောင်နှံများ၊ ညီအစ်မများ-သူတို့အားလုံးဟာ အမျိုးသားများ၏ဘဝတွင် ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြပါတယ်။ Elon Musk သို့မဟုတ် Steve Jobs ကဲ့သို့သော အအောင်မြင်ဆုံးလူများသည် ပင် ၎င်းတို့၏ဘဝတွင် ချစ်လှစွာသော အမျိုးသမီးများအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်းစကားများ မရှက်မကြောက် ဖွင့်သလေ့ရှိသည့်အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့မရှိလျှင် အရာအားလုံးသည် အလွန်ကွဲပြားခြားနားနေမည့်သဘောပင်ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့က အောင်မြင်သော အမျိုးသားများ၏ ဇာတ်လမ်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ဘဝအတွက် ပံ့ပိုးကူညီသော အမျိူသမီးများအကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်။
Maye Musk သည် ယနေ့ခေတ် အအောင်မြင်ဆုံးအမျိုးသား Elon Musk ၏ မိခင် ဖြစ်ပါတယ် ။ အသက်3နှစ်တုန်းကပင် သူက ဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ဆိုတာ သိထားပြီးသားလို့ ပြောပါတယ်။
အသက် 31 နှစ်တွင် Maye သည် ကလေး3ယောက်ရှိသည့် single mom ဖြစ်ပြီး သူမ၏ ဦးစားပေးမှာ ကလေးများဟာ ကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ရှိရန် အခွင့်အရေး ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို ထူထောင်ပြီး အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
Maye မှသူမ၏ကလေးများကို “လွတ်လပ်မှု၊ ကြင်နာမှု၊ ရိုးသားမှု၊ ထောက်ထားစာနာမှုနှင့်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ရန် ၊ အလုပ်ကြိုးစားရန်နှင့်ကောင်းသောအရာများပြုလုပ်ရန်” သင်ပေးခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ သူမသည် ဘာကိုလေ့လာရမည်ကို တစ်ခါမျှ မပြောခဲ့ဖူးပါ– “ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ ကလေးတွေကို ငါဘယ်လိုမွေးမြူထားလဲလို့ လူတွေက မေးလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်‌နောက်ကို လိုက်ခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် ငါလုပ်ခဲ့တာ။” လို့ပြောပြပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Maye က သူတို့ကို မဇိမ်ကျကျ နေထိုင်မှုပုံစံကို ကျင့်သုံးဖို့ အခွင့်အရေး မပေးခဲ့ပါဘူး။ နှိမ့်ချနေဖို့က အရေးကြီးတဲ့အရာပါ လို့ပြောပြပါတယ်။
Laurene Powell Jobs သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် Steve Jobs သေဆုံးသည်ထိ အကောင်းဆုံးဇနီးသည် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စတန်းဖို့ဒ်စီးပွားရေးကျောင်းတွင် ဟောပြောပွဲပြုလုပ်နေစဉ် 1989 တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ဖုန်းနံပါတ်များဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ Jobs က သူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုအကြောင်းကို– “ကျွန်တော်က ကားပါကင်မှာ ​​ဒါက ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ နောက်ဆုံးညဖြစ်ခဲ့ရင် လို့ တွေးပြီး ကားပါကင်ကနေ ဖြတ်ပြေးပြီး ညစာစားမလားလို့မေးခဲ့တယ်။ သူမက ဟုတ်တယ် လို့ပြန်ပြောပြီး ငါတို့ မြို့ထဲကို လျှောက်သွားပြီးကတည်းက ငါတို့ အတူတူနေခဲ့ကြတာပဲ” လို့ပြောပါတယ်။
စတိဗ်ဂျော့သည် ၎င်း၏သားဦးမွေးဖွားပြီးနောက်တွင် များစွာပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ သူက အရမ်းလေးနက်ပြီး ညနေတိုင်း အိမ် စောစောပြန်ရောက်ပါတယ်။ ဒါက သူနှင့် Laurene ကြား အထူးဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် Jobs က သူ့အတွက် သူမဟာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြတဲ့ မေတ္တာစာတစ်စောင်ရေးခဲ့ပါတယ်– “လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကြောင်း သိပ်မသိခဲ့ကြဘူး။ နောက်တော့ ငါတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်က ငါတို့ကို လမ်းပြခဲ့ပါတယ် ။ Ahwahnee မှာ လက်ထပ်တုန်းက နှင်းတွေကျနေတယ်။ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ကလေးတွေရောက်လာတယ်၊ ကောင်းတဲ့အချိန်တွေ၊ ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေ မျိုးစုံရောက်လာပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မေတ္တာနှင့် လေးစားမှုတို့ကို အခြေခံကာ ခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့ကြရပါတယ်။
Karen Kempner (ညာဘက်) သည် Mark ၏မိခင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် ကလေးများကိုစောင့်ရှောက်ရန် နှင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၏ ရုံးခန်းမန်နေဂျာအဖြစ် လုပ်ကိုင်သည့်အပြင် စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Mark ၏ဖခင် Edward Zuckerberg က အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် “ကျွန်တော့်ဇနီးက စူပါမိန်းမတစ်ယောက်ပါပဲ” လို့ဆိုပါတယ်။
Mark က သူ့အမေက သူ့ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပြီး အောင်မြင်ဖို့လမ်းပြ ပေးခဲ့တယ်- “ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမေအတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်း ခေါင်မိုးပေါ်ကနေ အော်ပြီးကမ္ဘာကို အသိပေးချင်ပါတယ်။ယ” လို့ဆိုပါတယ်။
4. Christiano Ronaldo and Maria Doloresdos Santos Aveiro
ခရစ်စတီယာနို ရော်နယ်ဒိုဟာ ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုမှာ မွေးဖွားလာသူပါ။ သူ့အမေ Maria Dolores သည် ကျောင်းတွင် ထမင်းချက်လုပ်သူသာဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲအချိန်တွေကြာလာပေမဲ့ သူ့သားရဲ့အနားမှ ဘယ်တော့မှ မဝေးခဲ့ဘဲ နေရာတိုင်းကနေ သူ့ကို ခြွင်းချက်မရှိ ပံ့ပိုးပေးနေတုန်းပါပဲ။
မာရီယာ ဟာ ရော်နယ်ဒို ရဲ့ ဘဝ မှာ နာမည်ကြီး ဘောလုံး ကစားသမား တစ်ဦး အဖြစ် အောင်မြင်မှု တွေ ရရှိ ရာမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ကနေ ပါဝင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ရော်နယ်ဒိုဟာ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာ ကျောင်းထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဘောလုံးကိုပဲ အာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မာရီယာက သူ့ကို ယုံကြည်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာတော့ သူဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မာရီယာဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါသေးတယ်။
Arnold Schwarzenegger နှင့် Maria Shriver တို့ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြသော်လည်း အဆက်အသွယ်ကောင်းများ ဆက်လက်ထားရှိကာ ၎င်းတို့၏ မွေးနေ့များကို အတူတကွ ကျင်းပကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ 25 နှစ်ကြာအောင် ပေါင်းသင်းဖော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Arnold က သူမပေးခဲ့တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အထောက်အပံ့အတွက် အမြဲ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါတယ်- “သူမဟာ အရမ်းကောင်းပြီး အရာအားလုံးကို အတူတကွ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ သူမဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ပါ။” လို့ ဆိုပါတယ်။
မင်းသားက Maria သည် သူ့ဘဝ၏ အချစ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သော ရတနာများကို မည်ကဲ့သို့ သိမ်းဆည်းရမည်ကို– “အမှားမလုပ်နဲ့” လို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
6. Keanu Reeves နှင့် Patricia Taylor
Keanu Reeves နှင့် သူ၏မိခင် Patricia Taylor တို့သည် ထူးခြားဆက်ဆံ‌ရေးသံယောဇဉ်များရှိပါတယ်။ 2020 မှာ ကော်ဇောနီပေါ်မှာ သူတို့ ပေါ်လာတုန်းက သူတို့ဟာ လုံးဝ သူငယ်ချင်းလိုပါပဲ။
သူမသည် လူအများရှေ့တွင် သိပ်မထွက်ဘဲ နောက်ကွယ်တွင်သာ ရှိနေသော်လည်း Keanu သည် John Wick ရုံတင်ပြသမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် ကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုမှုအရသူ၏အောင်မြင်မှုတွင် သူမသည် ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်မှာ သိသာထင်ရှားလှပါတယ်။ “ ကျွန်တော် 15 နှစ်အရွယ်က ကျွန်တော်က သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ရင် အဆင်ပြေလား’ လို့ သူမကိုမေးတော့ သူမက ‘မင်းလုပ်ချင်တာလုပ်ပါ ချစ်လေး’ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ Susan နဲ့ Robert Downey တို့ဟာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်စုံတွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ သူတို့မှာ အတက်အကျကြီးမားတဲ့ ဇာတ်လမ်းရှိပါတယ်။ အစပိုင်းတွင်၊ ဆူဇန်သည် ရောဘတ်ကို စိတ်မဝင်စားခဲ့ပေ–”သူနဲ့တွေ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်မှတ်မိတာက သူဘယ်လောက်ထူးဆန်းလဲဆိုတာကို တွေးနေမိတာပဲ။”လို့ဆိုပါတယ်။
သူမကို အကျင့်ဆိုးတွေကနေ Downey ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ Miracle အဖြစ်လူသိများပါတယ်။ တစ်ခါက သူမလက်လျှော့တော့မည်ဟု တွေးမိခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးမှာ Susan က သူနဲ့အတူနေဖို့သာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Robert က သူ့ကိုယ်သူ “ဘာတွေက ပြောင်းလဲစေခဲ့တာလဲဆိုတာ အတိအကျ မရှင်းပြတတ်ပါဘူး။ရှင်းပြဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းက ကျွန်တော် သူမနဲ့ ပိုတူလာတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို အဖြေရှာဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းပါပဲ” လို့ဆိုပါတယ်။
ငါ့အမေရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုက အံ့သြစရာပဲ” လို့ Leonardo DiCaprio က သူ့အမေ Irmelin Indenbirken အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ မင်းသားသည် ၎င်း၏အောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအတွက် သူမကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြီး အခမ်းအနားများတွင် Irmelin ကိုဝံ့ကြွားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော်ဟာ အခွင့်ထူးခံဘဝနဲ့ ကြီးပြင်းလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ လော့စ်အိန်ဂျလိစ် အရှေ့ဘက်ရှိ အလွန်ကြမ်းတမ်းသော ရပ်ကွက်တွင် ကျွန်တော် ကြီးပြင်းခဲ့တာပါ ။ ဒီအမျိုးသမီးက မတူညီတဲ့အခွင့်အရေးကိုပြသဖို့ တစ်နေ့ကို ၃ နာရီ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Irmelin သည် ခက်ခဲသောအချိန်များကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ကြင်ဖော်မဲ့မိခင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် ရုရှားဒုက္ခသည်တစ်ဦး၏သမီးဖြစ်ပြီး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် အမေရိကန်သို့ ပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့ပါတယ်။ လီယိုနာဒို က “ငါ့အမေရဲ့ပုံကို မင်းမြင်ရင် ကြေကွဲရမျာ။သူ့ဘ၀မှာ ဘာတွေ ကြုံခဲ့ရလဲဆိုတာကို သိလိုက်ရတော့ ကျွန်မ မျက်လုံးတွေ မျက်ရည်တွေ စီးကျလာတယ်” လို့ပြောပြပါတယ်။
Jeff Bezos သည် Amazon ၏တည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ့အမေ Jacklyn Bezos သာ ထိုကဲ့သို့ သန်မာသောအမျိုးသမီးမဟုတ်ပါက “ကျွန်တော့်အမေ Jackie က New Mexico၊ Albuquerque မှာ အသက် 17 နှစ်အရွယ် အထက်တန်းကျောင်းသူလေးတုန်းက ကျွန်တော့်ကို ပေးခဲ့တယ်။ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းဟာ Albuquerque မှာ သူ့အတွက် ခက်ခဲ ခဲ့ပါတယ်။”
Jacklyn က သူမသည် စာစီစာရိုက်အားနည်းပြီး သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လက်ရေးကိုပင် မဖတ်တတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်”။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့ကို ငှားရမ်းခဲ့ပြီး တစ်လကို ဒေါ်လာ ၁၉၀ ပေးရတဲ့ အလုပ်တစ်ခု ရခဲ့ပါတယ်။
ဒီဒုက္ခတွေအားလုံးကို မိဖုရားကြီးလို ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ကာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ သားလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တယ်။
Wanda Ventham သည် အင်္ဂလိပ်မင်းသမီးဖြစ်ပြီး Benedict Cumberbatch ၏မိခင်ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားက သူမ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံခဲ့ရပြီး ရုပ်ရှင်လောကမှာလည်း ပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက Benedict ဟာ သူ့အမေကို ပြဇာတ်တွေမှာ မြင်ခဲ့ရပြီး သရုပ်ဆောင်ဘဝရဲ့ အစပြု။တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆို သူတို့နှစ်ယောက်ကို မကြာခဏတွေ့နေရကာ Benedict က အရမ်းပျော်နေပြီး သူ့အိမ်မက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း နှစ်တွေကြာအောင် ပံ့ပိုးပေးခဲ့လို့ သူမရှိတာဟာ ကံကောင်းတယ်လို့ ခံစားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သင့်ဘဝမှာရော သြဇာအရှိဆုံး အမျိုးသမီးက ဘယ်သူ ဖြစ်မလဲ။